Blogs » Politics » Nepali News, social, entertainment &asite representing Nepal to the world !
पूर्वराजा ५ लाख तिरेर फिस्टेल लजमा बस्दै
पोखराको फिस्टेल लजमा जाँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह। तस्बिर : मनोज अधिकारी
समुन्द्र पौडेल/मनोज अधिकारी, तनहुँ/पोखरा, असोज ४- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह साता लामो धार्मिक भ्रमणका लागि पोखरा आइपुगेका छन्। पृथ्वीराजमार्ग हुँदै निजी मोटरमा आएका उनी बैदामस्थित फेवाताल पारीको फिस्टेल लजमा बसेका छन्। उनी आउँदा सयौं पोखरेलीले झरीको वास्ता नगरी सडकमा लामबद्व भएर स्वागत गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरुले पूर्वराजाको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरे। दिनभरको टन्टलापूर घाम ज्ञानेन्द्र आइपुग्ने बेला मुसलधारे वर्षामा परिणत भइसकेको थियो।
शाहले आफ्नो प्रतिक्षामा घन्टौंदेखि मुस्ताङ चोकमा कुरेर बसेका नगरबासीलाई गाडीबाट ओर्लेर पैदल यात्रामै साथ दिए। उनले करिब एक किलोमिटर दूरीको फिस्टेल लजसम्म झण्डै एक घण्टा हिँडेरै यात्रा तय गरे। ज्ञानेन्द्र फेवातालमा फेरि चढेर उनी फिस्टेल लज पुगेपछि उनका समर्थकहरु फर्किएका थिए।
पूर्वराजालाई लेखनाथको राधाकृष्ण मन्दिरमा भेला भएका सयौं पोखरेली युवाहरुले मोटरसाइकलबाट स्कर्टिङ गर्दै पोखरासम्म लाइएका थिए। स्वागत समिति अन्तर्गतको प्रचार उपसमितिका संयोजक अर्जुन बस्नेतले पूर्वराजालाई पाँच सयभन्दा बढी मोटरसाइकलले स्कर्टिङ गरेका थिए। नगरबासीले पञ्चेबाजासहित नाचगान गर्दै स्वागत गरेका थिए।
सत्तारुढ एनेकपा माओवादी कास्कीले धार्मिक भ्रमणका नाममा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै शाहको भ्रमण बिथोल्ने चेतावनी दिए पनि कतै अवरोध पुर्‍याएन। पूर्वराजा शाहले शुक्रबारबाट एक सातासम्म म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा र तनहुँका विभिन्न मठमन्दिर पुगेर देवीदेवताको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ।
पूर्वराजाको र उनको टोलीका लागि फेवाताल पारीको फिस्टेल लजका अति विशिष्ट ७ कोठा ५ दिनका लागि बुकिङ भएका छन्। जयन्ती ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालित उक्त होटललाई त्यसका लागि ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भइसकेको होटल स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त होटलमा एक कोठाको प्रतिरात १८० देखि २ सय डलर मूल्य पर्छ।
'५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर ७ कोठा ५ दिनका लागि बुकिङ भएको छ' होटलका एक अधिकारीले भने।
पूर्वराजालाई राजमार्गमा स्वागतको ओइरो
गण्डकी र धवलागिरी अञ्चलका विभिन्न धार्मिक स्थलको एक साता लामो भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौंबाट गाडीमा पोखरा आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पृथ्वी राजमार्गका मुख्य-मुख्य स्थानमा समर्थकले स्वागत गरे। शाहले धादिङको मलेखुस्थित भद्रकाली मन्दिरमा पूजाआजासमेत गरे। उनको स्वागतका लागि बिहीबार बिहानैदेखि भद्रकाली मन्दिर आसपासमा बसेका समर्थकले उनलाई फूलमालाले स्वागत गरे। 'हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ' भन्दै उनीहरुले राजाको जयजयकार गर्दै नारावाजीसमेत गरे।
चितवनको कुरिनटारस्थित रिभर साइड रिर्सोटमा खाना खाएर पोखरातर्फ लागेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको टोलीलाई चितवनको मुग्लिन, तनहुँको आबुँखैरेनी, दमौली बजारमा समर्थकले जयजयकार गर्दै फूलमालाले स्वागत गरे। उनको सुरक्षार्थ सादा पोसाकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
करिब आधा दर्जन चिल्ला गाडीसहित सयभन्दा बढी मोटरसाइकलको स्कटिङमा आएका पूर्व राजा धादिङको मलेखु र तनहुँको दमौलीमा गाडीबाटै झरेर समर्थकबाट फूलमाला ग्रहण गरेका थिए। राजावादीको जयजयकारसँगै केहीबेर दमौली बजारमा पैदल हिँडेका शाहले ८ गते दमौली आउने भन्दै गाडी चढेर गएका थिए। उनको स्वागतका लागि वृद्धदेखि च्चा बोकेका महिलासमेत स्वागतका लागि फूलमाला लिएर सहभागी भएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा जाने क्रममा दमौली बजारमा नागरिककर्मी समुन्द्र पौडेलले खिचेका तस्बिर :
सुमनबाबु भण्डारीको फेसबुकबाट लिइएएको भिडियो हेर्नुस् :
भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्व सहसचिव खनाल का
२० प्रतिशत कैद र जरिवाना छुट-
काठमाडौँ, भदौ २१- सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव आनन्दप्रसाद खनाल आज आफैं काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जरिवाना र बिगोबमोजिमको रकम बुझाई कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजारस्थित सदर खोर गएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले खनाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १५ महिना कैद तथा बिगो र बिगो बराबर जरिवानाबापत रू दुई करोड ४३ लाख चार हजार असुल गर्नुपर्ने फैसला यही भदौ १२ गते सुनाएको थियो।
फैसलामा उक्त इजलासले गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति र ऋण सापटी दिएको रकमसमेत अन्य स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट जफत हुने ठहर गरेको थियो।
फैसला भएको नौ दिनपछि खनाल आज स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई जरिवानाबापत नगद र बैङ्क ब्यालेन्ससमेत गरी रू ९७ लाख ३ हजार ६०० बुझाएको तहलसिलदार पुनाराम खनालले जानकारी दिए।
फैसला भएको ६० दिनभित्र आफैं अदालत उपस्थित भई आत्मसमर्पण गरे बिगोबाहेक २० प्रतिशत कैद तथा जरिवाना मिनाहा हुने कानुनी प्रावधानबमोजिम खनालले सो रकम बुझाएको हो।
फैसला हुनुभन्दा अघि पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा बसेका पूर्व सहसचिव खनालले अब १० महिनामात्र कैद जीवन बिताउनुपर्ने पनि तहसिलदार खनालले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव खनाल, उनकी श्रीमती पद्मा र तीन छोरासमेतविरुद्ध रू तीन करोड ९७ लाख ४० हजार बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सो मुद्दामा विशेष अदालतले रू एक करोड २० लाख २३ हजार बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दर्शाई बिगोबमोजिम जरिवाना र एक वर्ष कैदको निर्णय सुनाएको थियो।
यो फैसलाविरुद्ध दुबैतर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो। रासस
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउन खोज्दा आफ्
२१ भदौ, काठमाडौं । इन्धनको मूल्यबृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जनाउन खोज्दा आन्दोलनरत विद्यार्थीको अनुहार जलेको छ ।
बिहीबार विहान घण्टाघर नजिकै विद्यार्थीहरुको एउटा समूह भेला भएर पुत्ला लजाउन खोजेका थिए । प्रहरीले पुत्ला खोस्ने डरले सानो घेरा बनाएर प्रधानमन्त्रीको पुत्लाकम पेट्रोल छर्कन खोज्दा सागर धितालको अनुहारमा पनि पर्‍यो तर, सलाई कोर्नेले थाहा पाएनन् । उनले पुत्तामा के आगो लगाएथिए, सागरको अनुहारमा पनि सल्किहाल्यो ।
अनुहारमा आगो लागेपछि साथीहरुले निभाउन खोजे तर, सकेनन् । दौडिएर नजिकैको फलफुल पसलमा पुगेका उनको मुखमा पसलेले पानी हाले र बल्ल आगो निभ्यो । त्यतिन्जेल उनको अनुहार डढिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जदाउँछु भन्दा साथीको अनुहार नै डढेपछि सहकर्मीहरूले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाइर् तत्काल अस्पताल लगे । पुत्लामा बलेको आगोले अर्का दुई विद्यार्थीलाई पनि अलिकति भेट्टाएको छ । उनीहरूलाइआगोले घाउ नै लाग्ने गरी पोलेको भने छैन
फेसबुकमा एमालेको आलोचना गर्ने डिएसपीको स
काठमाडौं, भदौ ५ (नागरिक)- सरकारविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा युवा संघ कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि गरेको ज्यादतीको सोसल मिडियाबाट कडा टिप्पणी गर्ने डिएसपी दीपशमसेर राणालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको छ।
दुई साताअघि संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले महानगरीय प्रहरी मुख्य घटना सहायता कार्यदलका एक सिपाहीमाथि जलिरहेको मसालले आक्रमण गरेको घटनाको राणाले फेसबुकबाट टिप्पणी गरेका थिए। उनले फेसबुकमा उक्त कामको आलोचना गर्दै बस्नेतलाई संरक्षण दिएको भन्दै उनको माउ पार्टी एमालेको समेत आलोचना गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार राणाको फेसबुक स्टाटसलगत्तै एमालेका उच्च नेताले प्रहरीका माथिल्ला अधिकारीलाई राणा सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए। बस्नेतले प्रहरीमाथि गरेको दुर्व्यवहारप्रति प्रहरीका उच्च अधिकृतसमेत असन्तुष्ट भए पनि एमाले नेताहरूको निरन्तर दबाबपछि प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले राणालाई कार्यदलबाट प्रधान कार्यालयको ट्राफिक निर्देशनालयमा सरुवा गरेका छन्। राणाको ठाउँमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याइएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगन्जका डिएसपी जगदीश पोखरेललाई आइतबार काजसरुवा गरी ब्युरोमा ल्याइएको छ। ब्युरोका डिएसपी ओम अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखा र डिएसपी जीवन श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगन्ज लगिएको छ। दोलखाका डिएसपी उमेशराज जोशीलाई ब्युरोमा ल्याइएको छ। नियमित सरुवाको सट्टा काज सरुवा गरिनुलाई प्रहरी अधिकृतले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
(c) Livenepal.com · English (US)